အဆိုပါစကော့တလန် Highlands သို့အတွက်စက်ဘီး
အဆိုပါစကော့တလန် Highlands သို့များတွင်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်စက်ဘီး
အပေါ် Written 14 နိုဝင်ဘာလ 2014 ။ Posted in, လှုပ်ရှားမှုများ
Cycling in the Highlandsအများအပြားသည်ဒေသခံစက်ဘီးစီးကလပ်အသင်းများနှင့်စကော့တလန်နှင့်ဗြိတိန်၏ကျန်အတွက်အများအပြားသံသရာစည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုအုပ်စုများရှိပါတယ်။ ဒီလောက်သေးအောင်လုပ်နိုင်တာသံသရာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးတို့ကိုပါဝငျသောတကိုယ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံစွာအဝေးပြေး Code ကိုလိုက်နာပါစက်ဘီးလမ်းများပေါ်စက်ဘီးစီးခြင်းအဘို့အသိကောင်းစရာများ - ကသတ်မှတ်ထားသောသံသရာလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်မဟုတ်လျှင်အနီရောင်မီးလုံးခုန်မဟုတ်နှင့်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်ပေါ်သံသရာကိုမပြုကြ; မျက်နှာပြင်ချောဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ကရပ်တန့်ဖို့ပိုရှည်သငျသညျယူပါလိမ့်မယ်အဖြစ်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၌သင်တို့၏မြန်နှုန်း watch; ယင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း၏ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့်ကောင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အပြုသဘောစီး; တစ်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ထားစဉ်းစားကြည့်ပါ, သင့်ရဲ့စက်ဘီး roadworthy ထားပါ။
ယာဉ်မောင်းတွေဆီကသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်များနှင့်မြင်စေတဲ့အနေအထားကိုစီးမြင်နိုင်ပါသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ, အလင်းအိမ်ကိုသုံးပါနှင့်အထူးသဖြင့်မြို့များတွင်ညဉ့်အခါမှာရာသီဥတုဆိုးရွားအတွက်, တောက်ပသို့မဟုတ်ရောင်ပြန်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ဆင်ခြင်ကြလော့ ထို့နောက်သင်သည်သူတို့သငျသညျကိုတှေ့မွငျတော့သိပါ, ​​အထူးသဖြင့်ဆုံမှာအခြားလမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်မျက်လုံးချင်း Make; signal ရှင်းလင်းစွာခပ်သိမ်းသောကာလ; သင့်ရဲ့ခေါင်းလောင်းကိုသုံးပါ - အားလုံးမဟုတ်လမ်းသွားလမ်းလာသင်တစ်ဦးစက်ဘီးစီးသူလက်ဝဲလှည့်သောမော်တော်ယာဉ်၏အတွင်းအပေါ်အခါအတော်များများတိုက်မှုဖြစ်ပွားမော်တော်ယာဉ်များသတိထားဖြစ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ယာဉ်ကဘယ်ဘက်ကိုပြမထားဘူးလို့ဖြောင့်ရှေ့ကိုသွားမယူဆပါနဲ့။ ဤအခြေအနေ၌ 'ဂတိ' 'ဆိုမော်တော်ယာဉ်ကိုအမြဲတမ်းရှောင်ရှား - ကမော်တော်ယာဉ်ချွတ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်သည်အထိပြန်ဆွဲထားဖို့ပိုကောင်းပါတယ်။ သူတို့နိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့လုံခြုံစိတ်ချရသောလမ်းများစေရန်တဲ့မော်တော်ကားများအတွက်သိကောင်းစရာများ, မော်တော်ကားသမားလည်းစက်ဘီးစီးသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်: စက်ဘီးစီးသင့်ရဲ့အနီးဘက်မှာတက်လာမယ့်အဘို့အလက်ဝဲလက်ပတ်နာရီကိုလှည့်နှင့်သူတို့တက်မဖြတ်ကြဘူးသောအခါ, စက်ဘီးစီးကျော်တက်တဲ့အခါမှာကျယ်ပြန့်အိပ်စင် Give;
စက်ဘီးစီးချဉ်းကပ်လာသောအခါညဥ့်အခါ, သင့်ရှေ့မီးနှစ်; စိုစွတ်သောရာသီဥတုများတွင်မျက်နှာပြင်အဖြစ်စက်ဘီးစီးအပိုအခန်းကချောဖြစ်နိုင်သည်ခွင့်ပြုပါ။ ကိုသတိရပါ, စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းတွေဆီကအညီအမျှအတူတူပင်လမ်းအာကာသကိုသုံးပါနှင့်မျှဝေဖို့ခွင့်ရှိသည်။ အားလုံးလမ်းအသုံးပြုသူများကိုလေးစားလူတိုင်းအတွက်လမ်းအားဖြင့်ခရီးသွားလာခြင်းမှအကြိုးကူညီပေးသည်။ START TO သို့ https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code ကောင်းတဲ့နေရာ - ပိုမိုသိရှိလိုပါကကိုသွား
Callander ဟာ Loch Lomond နှင့် Trossachs အမျိုးသားဥယျာဉ်၏အရှေ့ပိုင်းအစွန်ပေါ်မှာထိုင်နှင့်စကော့တလန်ရဲ့ Loch & Glen Discover အနောက်နိုင်ငံတွေအဘိဓါန် Highland Way ကိုအပေါ်စကော့တလန်ရဲ့အနောက်ပိုင်းကုန်း၏အံ့မခန်းရှုခင်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦး Starting Point သို့ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကုန်းခရမ်းရောင် Heather ဝတ်, တောင်ကြီးတို့, ငြိမ်းချမ်း Loch နှင့်အပြေးအလွှားမြစ်များလမ်းတစ်လျှောက်အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာရာပူဇော်သက္ကာကို, Milngavie (Glasgow) မှဝိန်း Fort ဝီလျံရန်သင့်အားခရီး 96 မိုင်အဖြစ်အစဉ်အဆက်မူထူးခြားတဲ့နှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှုခင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆုချဖို့ပေါင်းစပ်မြင့်မားသည့်ငြိမ်းချမ်း Loch ရှာဖွေတွေ့ရှိ , ညားရဲတိုက် Inverness မှဝိန်း Fort ဝီလျံကနေရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တောင်တော်သို့စက်ဘီးခရီးစဉ်ကိုနေ့အရှိဆုံးဖှယျရှုခင်းအချို့မှတဆင့်ခရီးသွားလာနှငျ့ "မာရျနတျရဲ့လှေကားအုံ, ဘင်မှတဆင့် Rannoch Moore, Kinlochleven အားဖြင့်ညဥ့်အားဖြင့်အများကြီးအိပ်ရာနှင့်နံနက်စာ၌ကြီးသောကုန်းဧညျ့နမူနာကောကျ နေးဗစ်နှင့် Loch Linnhe ၏ခေါင်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးဝိန်း Fort William နဲ့စကော့တလန်ရဲ့အဆောက်အဦးအပြင် Capital ကို။
အဆိုပါ Loch Lomond & Trossachs အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့်အဘိဓါန် Highland Perthshire တက်စေ Loch နှင့် Glen ၏ရှုခင်းကတဆင့်သံသရာ။ အဆိုပါ Cairngorms အမျိုးသားဥယျာဉ်မှတဆင့်သငျသညျသံသရာအဖြစ်စကော့တလန် Explore ။ ချစ်စရာကောင်းကုန်းမြို့များ, သမိုင်းဝင်ရဲတိုက်, Speyside Malt ဝီစကီ, Jacobite စစ်မြေပြင်, Loch Ness န်းကျင်ကျေးလက်ဒေသများ၏အမြင်များအတွက်ယူမယ့်တကယ်ဖြေလျော့ပေးခြင်း, ပျော်စရာနှေးကွေး pase သည်, တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ယူပါ။
အဆိုပါ Loch Ness ဧရိယာထိုကဲ့သို့သောမဟာ Glen Way ကိုအဖြစ် Off-လမ်းလမ်းကြောင်းများ, အကယ်လီဒိုးနီးယားတူးမြောင်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ပိုက်ဆန်လျှော်-လမ်းကြောင်းကနေစိန်ခေါ်မှု, ရှည်လျားသောအကွာအဝေးမှမြေပြင်အနေအထားတစ်ခုကျယ်ပြန့်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ Strathnairn ၏တိတ်ဆိတ်တိုင်းပြည်လမ်းများနှင့် Loch ၏တောင်ဘက်ခြမ်းစက်ဘီးစီးအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြပြီးလည်းစက်ဘီးစီးကောင်းသောတောင်ဝန်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Strathglass ဧရိယာတိုင်းပြည်အတွင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအပြိုင်တောင်စက်ဘီးအတှေ့အကွုံပေးထားပါတယ်။ Beauly နှင့် Loch Ness ကနေကုန်းတွင်းပိုင်းအဆိုပါ strath ကိုဆန့် Affric, Cannich နှင့် Strathfarrer ၏သုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Glen အတွက်အထှတျအထိ, လမ်းတစ်လျှောက်တွင်သစ်တောလမ်းကြောင်းများစွာသောလူရာပူဇော်သက္ကာကို။ Glen Cannich သိသိသာသာ Cannich ရွာအထက်မြင့်တက်လာနှင့်ရေတို, ဒါပေမယ့်အထင်ကြီးစရာတောင်တက်၏အောက်ပိုင်းတောင်စောင်းအဆိုပါအကွေ့အကောက်များသော Mullardoch လမ်းမပေါ်တွင်အချို့သောစီးနင်းနဲ့ပေါင်းပြီး,9မိုင်ဝေးကွာသော, Loch Mullardoch ရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော, သစ်တောပုဒ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဤသည်မြင့်မားသောတောင်များဝိုင်းရံထားတဲ့အထင်ကြီးမျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်။ Glen Cannich မှတဆင့်အဆိုပါတောင်တက်ဆက်ဆက်မတ်စောက်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်လမ်းအတော်လေးတိတ်ဆိတ်နှင့်ပြန်လာ, ရှိသမျှကုန်းဆင်းအတိုင်း! Glen Affric, Cannich နှင့် Tomich နှစ်ဦးစလုံးထံမှသစ်တောလမ်းများမှတဆင့်နီးပါးလုံးဝချဉ်းကပ်နိုင်ပြီး Loch Beinn ၏ကမ်းခြေတစ်ဦး '' Mheadhoin, ရေတစ်မှော်လမ်းပိုင်းပေါ်တွင်ရပ်တန့်။ တောင်ဘက် Tomich နှင့် Cannich ၏အောက်ပိုင်းတောင်စောင်း, Corrimony ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပင်ကျော် Glenmoriston ရန်, ဝေးကအားလုံးကိုထံမှဝေးလံခေါင်သီပုဒ်ရှိပါတယ်, ဒါဟာဆင်းခွေးရေတံခွန်ကနေ Knockfin ရန်လမ်းကြောင်းစံပြတောအရပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသင် Tomich ကူးခေါင်းအဖြစ်အထင်ကြီးသည်, သို့မဟုတ်တနည်း Loch Affric ထံမှ Tomich ဖို့အနောက် Guisachan အိမ်ခြံမြေ, Cougie နှင့် Plodda ရေတံခွန်ကနေတစ်ဆင့်။ ကြောင်းကနေအပေါ်သက်တမ်းတိုးရေး, သင် Corrimony ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပင်ကျော် Glenmoriston ရန်, တောင်ဘက် Tomich နှင့် Cannich ၏အောက်ပိုင်းတောင်စောင်းကျော်ကိုဆက်လက်နိုငျသညျ, အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာသုံးဆောင်နေဖို့မှစံပြနေရာ, ပယ်လမ်းယာဉ်ရပ်နားနှင့်သံသရာသိုလှောင်မှုနဲ့အတူခြောက်မိုင်သည်ခမည်းတော်အရာ၌တိုင်းပြည်အင်းဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ strathglass နှင့်ဤဧရိယာမှာရှိတဲ့တခြားရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Glen ၏စတင်အလွန်ကောင်းသောနှင့်အဆာညနပေိုငျးအစားအစာများဒေသခံ ale, သင်တနေ့လုံးအဆိုပါသည်ခမည်းတော်အရာ၌အဘိဓါန် Highland Glen သွားစောင့်ရှောက်ရန်, နံနကျမှာတော့အိပ်ရာမဝင်မီကောင်းတစ်ဦး harty ကုန်းနံနက်စာညနေပိုင်းတွင်ပြီးဆုံးရန်ဘီယာနှင့် toddy Lodge
တောင်တို့, Loch နှငျ့သငျသံသရာအဖြစ် Skye ၏ကျွန်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းရိုးတန်းအချို့ကိုသင်အမှန်တကယ်အရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းပျော်မွေ့နိုင်မည့်ငြိမ်းချမ်း, အချည်းနှီးသောအရပ်တို့ကိုဖြစ်ကြောင်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်ကျွန်း hideaways ကမ်းခြေအပြည့်အဝကဤ enchanting ကျွန်းများ၏အရှည်နှင့်အနံရှာဖွေပါ။ အစ္စလီ၏ကြမ်းတမ်းကမ်းရိုးတန်း Arran, အစ္စလီများနှင့် Jura ကြက်သရေပတ်ပတ်လည်သံသရာမှခြွင်းချက်သောနေရာများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်းဖွယ်ရှိနေသည်အသစ်တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ကိုပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်းပတ်လည်ရှိလမ်းများကထိပ်တန်း, အတွေ့အကြုံမေ့လျော့ခံရဖို့ဘယ်တော့မှအောင်စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်းဖွယ်ရှိနေသည်ညဉ့်သုံးဖြုန်းဖို့ပင်ပန်းခရီးသွားများအတွက်အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာသုံးဆောင်ရာပူဇော်သက္ကာကိုအသစ်သောအရပ်တို့ကိုမရန်သင့်အားယူချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိပ်ကမ်းဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကဝီစကီချစ်သူများလွန်းကျွန်းများနှင့်များစွာသောအလွန်ကြိုဆိုပွဲအရက်ဆိုင်များနှင့်အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာအပေါ်ရှစ် distilleries အတူစစ်မှန်တဲ့လာအိပ်မက်မှာပါ! ကျွန်းများပေါ်တွင်ကျေးရွာများအားလုံး delightfully အဖြူသုတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဝီစကီအထူးသဖြင့်ရှည်လျားသောနေ့ကစက်ဘီးစီးပြီးနောက််တယ်သော peaty အရသာရှိပါတယ်, စကော့တလန်၏မြောက်ဘက်မှလက်ျာဘက်ခရီးသွားရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်င်တဲ့ကမ်းရိုးတန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကိုဆိုလိုပါတယ်။
Dunnet ဌာနမှူးတစ်ဝှမ်းစက်ဘီးအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကျွန်းများ၏အံ့သြဖွယ်ကမ်းခြေနှင့်အမြင်များကိုဝါကြွားသောသူအချို့ကြက်သရေ bays နှင့် coves အတိတ်သင်ကြာ, အသေးစား, မိသားစုကို run အိပ်ရာ & နံနက်စာတစ်ဦးရှေးခယျြမှုနှင့်အတူနေရန်အချို့သောအံ့သြစရာရိုးရာသောအရပ်တို့ကိုမနေထိုင်ရန်အဆောင်များအဖြစ်ရှိပါတယ်, အပြင်ကသူတို့ကိုအကြောင်းအချို့ကျက်သရေရှိသည်သောဟိုတယ်များ။ သငျသညျစကော့တလန်နေနှင့်သင်အများဆုံးသောနေရာများသည်သင်၏စက်ဘီးများအတွက်လုံခြုံသိုလှောင်မှုပူဇော်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်နေရာတိုင်းမှာသင်တစ်ဦးနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
0.0/5 မှ0ratings ။
rating အကျဉ်းချုပ် *
ဧရိယာကို Select လုပ်ပါ AberdeenshireAngusArgyllBanffshireCaithnessInvernessKincardineshireမိုရေးမြို့ထဲNairnshireOrkneyပြင် HebridesPerthshireရော့စ် & CromartyShetlandဆပ်သာလန်
အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ် အမှတ်
ဝိန်း Fort ဝီလျံဧည့်သည်ပြန်ကြားရေးလမ်းညွှန်
အဆိုပါစကော့တလန်အမျိုးသားပြတိုက် (Edinburgh) လမ်းညွှန်
မတရားသောသူတို့အမွေအနှစ် Center ကခရီးသွားလမ်းညွှန်
အဆိုပါစကော့တလန် Highlands သို့အတွက် Walking မှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
Glen မိုရေးမြို့ထဲ Distillery
Glen Urquhart ဧည့်သည်ပြန်ကြားရေးလမ်းညွှန်
display #510 15 20 25 30 50 100 အားလုံး